Ny kiraro ara-panatanjahatena tsara indrindra - Nike, Adidas, Reebok, Puma, fahavaratra, ririnina, amin'ny kirany, tongotra, sehatra
Kiraro fanatanjahan-tena sy ny tsara indrindra amin'ny lamaody maoderina
Ny kiraro ara-panatanjahan-tena dia ilaina ho an'ny olona rehetra izay mandray anjara amin'ny kolontsaina ara-batana na mitarika fomba fiaina mavitrika. Ankoatra izany, noho ny fiononana sy ny fampiononana dia ampiasaina amin'ny akanjo isan'andro izany. Ny karazany maro samihafa ahafahan'ny fashionista tsirairay mifidy ny safidy mety.
Kiraro fanatanjahantena vehivavy
Ny kiraro fanatanjahan-tena ho an'ny vehivavy dia afaka manavaka ny hafa Ankoatra ireo ked sy sneakers fantatra rehetra, misy safidy maoderina maro izay mibanjina tsara ary manolotra ny tompony amin'ny fampiononana manokana. Ny modely sasany dia misy fitaovana mahaleotena tsara indrindra, izay ahafahan'izy ireo misaina na amin'ny ririnina na amin'ny vanim-potoana, raha tsy misy fahatsapana hafahafa.
Kiraro fanatanjahantena ho an'ny ririnina
Ny kiraro ara-panatanjahantena malaza indrindra dia boots timberland amin'ny felam-paty na fanangonan-tsoratra. Ireo vokatra ireo dia nahazo fizarana tsy misy fetra teo amin'ny tanora, satria izy ireo dia mamelatra tsara ireo zavatra akanjo rehetra mifandraika amin'ny làlana an-dalambe, ary tsy miteraka fikorontanana, na dia amin'ny sombina lava aza. Ankoatra ny kitay, ao anatin'ny vanim-potoana mangatsiaka mandritra ny taona ny mpilalao mafana mafana, ny "dummies" na ny moccasins ririnina dia malaza.
Amin'ny ivelany, ny vokatra toy izany matetika dia manana akanjo marevaka, manome azy ireo ny endriny marevaka sy kanto. Ny endriky ny modely toy izany dia tsy maintsy voatery manana takaitra tsy voafehy manokana izay afaka miaro ny tompony amin'ny loto sy ratra. Ankoatr'izany, ny vokatra tsara amin'ny marika fanta-daza dia tsy maintsy manana toetra tsara amin'ny fanamiana voajanahary mba hisorohana ny rano sy ny fitondran-tena hidirana ao anatiny. Raha tsy izany, amin'ny toetr'andro mangatsiaka, ny vokatra toy izany dia ho tsy mampino.
Ireo kiraro fanatanjahan-tena Summer Summer
Ny akanjo ho an'ny fanatanjahan-tena sy fialam-boly dia lasa malaza amin'ny fahavaratra. Mahafinaritra ho an'ny fiaraha-mientana ivelan'ny trano, fialana sy fanatanjahantena, mihazakazaka ary fialamboly hafa. Ankoatr'izany, amin'ny vokatra toy izany, dia tena tsara ny mandeha sy mandeha - tsy manety ny tongony mihitsy izy ireo ary manome fampiononana farafaharatsiny na amin'ny andro mafana.
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny firaisana ara-drariny ho an'ny vanim-potoamin'ny fahavaratra dia misafidy modely tsy tapaka izay mametraka ny tongotra eo anoloana sy aoriana. Mandritra izany fotoana izany, amin'ny habetsahan'ny vokatra atolotra, dia afaka mahita vokatra misokatra ihany koa izay ahafatesan'ny hoditra tanteraka.
Ny akanjo sy ny akanjo ho an'ny fanatanjahantena dia novokarin'ny mpamokatra marobe manerana izao tontolo izao. Ireo marika malaza dia manamboatra teknolojia manokana izay manome fanamafisana sy fanamafisana ary fampiononana lehibe indrindra mandritra ny kiraro. Ankoatra izany, ny stylists sy ny mpahaikanto dia manamboatra ny endriky ny kiraro, kiraro sy kiraro fanatanjahan-tena hafa, mba hahafahan'ireo tovovavy sy tovovavy manintona sy manintona foana.
Ny marika erantany manerantany Nike dia mamokatra lamaody, akanjo matevina ary mahazatra izay mety ho an'ny fanatanjahan-tena sy isan'andro. Ny kiraro fanatanjahan-tena Nike dia mendri-piderana sy mahafinaritra, noho izany dia mandeha tsara amin'ny akanjo, jeans, skirt, pataloha sy ny sisa. Ao amin'ny modely amin'ity marika ity dia mora ny mihazakazaka, manao fitondra-tena ary mandeha fotsiny. Ankoatra izany, misy safidy mazava tsara dia mety amin'ny antoko.
Kiraro ara-panatanjahantena Ribok
Ny kiraro ho an'ny fanatanjahan-tena Women Reebok, natolotr'ireo karazan-tsakafo faran'izay sarotra indrindra, dia manolotra ny zavatra ilaina. Izy io dia vita amin'ny fitaovana avo lenta, manome fahafahana malalaka, fampiononana ary fahatokisan-tena. Ny vokatra amin'ity marika ity dia tena malaza eo amin'ny ankizivavy sy ny vehivavy manerana izao tontolo izao, indrindra ireo modely modely.
Ny puma ara-panatanjahantena Puma dia tena manamaivana ny enta-mavesatra. Io vokatra io dia tanterahana amin'ny alalan'ny lamina maivana, ny rafitra fanamafisana ny alahelo ary ny elatra tsotra. Ny karazan'ity marika ity dia manana karazany maro, ohatra:
Ny vokatra vita amin'ny hoditra marina, izay manavaka ny faharetany, ny faharetany ary ny endriny mahafinaritra sy mahafinaritra. Izy ireo no tena tsara indrindra amin'ny fandehanana any amin'ny toetr'andro be izao, ho an'ireo hetsika fanatanjahan-tena mafana, dia mety ny mifantoka amin'ny safidy hafa;
Ireo kiraro fanatanjahan-tena any ivelany dia mijery voalohany, mamiratra ary mahaliana. Raha oharina amin'ny safidy hafa dia misy ny fiantraikany manan-danja - mitaky fitsaboana sy fitsaboana tsara alohan'ny hiala sasatra eny amin'ny arabe. Raha tsy izany, ny zavatra avy amin'ny firaiketam-po voajanahary dia lasa maloto sy tsy mety;
vokatra avo amin'ny tokona matevina, novokarin'ny marika Puma, miaro ny tongotra tsy ho lena. Izy ireo dia tena tsara ho an'ny asa ivelan'ny toetr'andro amin'ny toetr'andro sy ny dia;
kiraro manokana Puma - safidy ny atleta matihanina. Noho ny teknika manamboatra manokana, dia manamaivana be ny fomba fiasa mihetsiketsika sy manatsara ny kalitaon'ny fampiofanana;
Ny kiraro atleta eo amin'ny sehatra dia tsara indrindra ho an'ny vehivavy lanto ambany. Ny hany tokana dia afaka mamorona amin'ny fomba mahazatra kokoa ny mpamboly aminy, kanefa tsy manelingelina azy izany.
Kiraro fanatanjahantena Adidas
Araka ny atleta sy ny manam-pahaizana matihanina, ny kiraro fanatanjahantena tsara indrindra dia anisan'ny mpanoratra ny marika Adidas. Izy io dia vita amin'ny firavaka voajanahary , hoditra, fingotra ary ny tsy misy. Na inona na inona endrika, ny karazana pataloha sy ny stylistic, ny kiraro fanatanjahatena vehivavy dia manome fampiononana sy fampiononana.
Kiraro amin'ny fomba fanatanjahantena
Ny kiraro fanatanjahatena fanatanjahatena dia aseho amin'ny karazan-javatra isan-karazany, anisan'izany ireo modely klasika amin'ny tokantrano iray mitoka-monina. Raha ny fitsipika, izy ireo dia novolavolaina tamin'ny efitra fisakofana orthopedique, izay mamerina ny endriky ny tongotra ary mampihena ny entana eo amin'ny ambany. Mandritra izany fotoana izany, ireo vehivavy modely maoderina dia tsy te handao ny volony, ny sehatra na ny kibay na dia misafidy sary amin'ny endrika fanatanjahan-tena aza. Ho an'ny zazavavy toy izany ao amin'ny fanangonana marika malaza dia misy modely mahaliana sy niavaka.
Kiraro fanatanjahan-tena amin'ny kalesy
Ny akanjo fanatanjahatena fanatanjahatena eo amin'ny kiraro ho an'ny vehivavy amin'ny fomba mahazatra dia tsy ambany noho ireo mpitaingin-tsoavaly na mpitaingin-tsoavaly tsotra. Ankoatra izany, dia azo ampiharina sy azo ekena izany - mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny akanjon'ny vehivavy. Na dia izany aza, amin'ny ankizivavy sasany dia tsy manintona loatra ny safidiny - raha eo am-pelatanana ny tongotra matevina dia manao ny sarin-doha sy mavesatra. Ankoatra izany, ny fiakarana avo lenta dia afaka mampitombo ny entana eo amin'ny faritra ivoatra, ka mahatonga ny fahaverezan'ny tombony rehetra amin'ny fanatanjahan-tena.
Ny kiraro fanatanjahantena vehivavy eo amin'ny sehatra dia manome fampiononana ampy ho an'ny mandeha an-tongotra sy ny asa ivelan'ny trano. Na dia izany aza, ho an'ny atleta matihanina dia tsy mety izany, satria tsy mizara ny entana marina. Amin'ny ankapobeny, ireo zavatra ireo dia nofinidin'ireo tovovavy tanora te-ho tia sy manintona ny saina. Ny sehatra dia afaka manana elatra hafa, amin'ny tranga sasany mahatratra hatramin'ny 20 santimetatra, mba hampitombo ny fitombony amin'ny fitomboany amin'ny fanampiany dia mety ho manan-danja.
Ao amin'ny akanjo isan'andro, misy safidy isan-karazany, anisan'izany ny kiraro fanatanjahan-tena miaraka amin'ny hatsaran-tarehy hentitra sy mahavariana. Ny laza malaza manokana amin'ny ankizivavy sy ny vehivavy dia nahazo ireto karazana manaraka ireto:
pirinty leopard noho ny famoronana sary mahafinaritra sy sexy. Amin'izao fotoana izao dia tsy ny fanehoana malaza momba ny lokon'ny biby mpiremby ihany no mahaliana azy, fa ny fanelanelanana ny tasy mainty amin'ny mavokely, manga, beige na fotsy fotsy;
fotsy manopy fotsy manopy fotsy sy mainty;
mifanohitra ny fampifangaroana loko, ohatra, mena sy fotsy, mavo ary mainty, sy ny sisa;
loko "mamirapiratra" mamiratra - manga, mavokely mavokely, jiro mavokely ary hafa;
metaly eo amin'ny lampihazo. Mety ho gidro, rivotra ary safidy hafa;
pirinty manintona sy tsotra - tsemboka, ahitra, sela, nofinofy fantasy.
Kiraro tsara tarehy amin'ny fanatanjahantena ara-panatanjahantena dia afaka manana fehiloha. Na dia somary tsy mahazatra aza io fitambarana io dia malaza amin'ny vehivavy samy hafa taona izy. Mandritra izany fotoana izany, ny hatsikana amin'ny modely toy izany dia tsy maintsy mijanona ho mendri-panafana, tsy voatery ny singam-bolo eto. Ny kiraro fanatanjahan-tena miaraka amin'ny fehiloha dia mijery tsara ny modely amin'ny akanjo, mini-skirt , shorts fohy ary zavatra hafa akanjo. Rehefa mikasa ny hanao akanjo misy pataloha, tsara kokoa ny manolotra safidy hafa, toy ny kiraro kanto na kiraro.
Vavy Vietnamiana - 48 sary avy amin'ny vatnamok mody amin'ny fotoana rehetra
Mofo Foot mask
Ny akanjon'ny vehivavy Demi - Italia
Rahoviana ny hamboly eny amin'ny tany malalaka?
Miakanjo miaraka amin'ny soroka misongadina eo amin'ny tariby elastic
Ahoana ny famoronana majika?
Mihoatra noho ny alika maitso?
Toetry ny fahadiovana amin'ny fimamoana amin'ny gay
Kvas Bolotova amin'ny fahadiovana - toeram-pitsaboana
Sakafo kalorie vita amin'ny kalsa voatsoboka
Podcasts - inona ary ary fomba fampiasana izany?